Imililo Yesistimu Yamandla Esolar Nokushintshwa Kophahla Lophahla Olungasetshenziswanga
Kube nezehlakalo eziningana zomlilo eNew South Wales evikini eledlule noma ngaleyo ndlela ezibandakanya izinhlelo zamandla elanga - futhi okungenani ezimbili kucatshangwa ukuthi zibangelwe ukushintshwa kwezihlukanisi ezisophahleni. Izolo, abakwaFire and Rescue New South Wales babike ukuthi bebehambele isigameko esenzeke ekhaya eWoongarrah ...
Imishini eklanywe kahle kakhulu kule ndawo yonke ngumzimba womuntu. Inesistimu yokuzivikela nokuzilungisa eyakhelwe ngaphakathi enhle kakhulu. Ngisho nalolo hlelo oluhlakaniphe kakhulu ludinga ukulungiswa ngezikhathi ezithile. Futhi kunjalo ngalo lonke uhlelo olwenziwe ngabantu, kufaka phakathi ukufakwa kwelanga kwe-PV. Ngaphakathi kwe-solar ...
Izingxenye Zesistimu Yamandla Kagesi Wendawo Yokuhlala
Uhlelo oluphelele lwasekhaya lwamandla kagesi adinga izinto zokukhiqiza ugesi, ukuguqula amandla abe yimanje eshintshashintshayo engasetshenziswa yimishini yasekhaya, ukugcina ugesi okweqile nokugcina ukuphepha. Iphaneli Solar Solar panel kukhona t ...
USolar uchaze i-photovoltaics nogesi
Amaseli we-Photovoltaic aguqula ukukhanya kwelanga kube ugesi Iseli le-photovoltaic (PV), elijwayele ukubizwa ngokuthi yiseli elisebenza ngelanga, lingumshini ongasebenzisi imishini oguqula ukukhanya kwelanga kube ugesi. Amanye amaseli we-PV angaguqula ukukhanya kokufakelwa kube ugesi. Ama-Photons athwala amandla elanga i-Sunlight yakhiwe ...
Kungani kufanele uyokwenza i-photovoltaics?
Igama elithi photovoltaics (PV) laqala ukubalulwa cishe ngonyaka we-1890, futhi livela emagameni esiGreki: isithombe, 'phos,' okusho ukukhanya, kanye ne 'volt,' okusho ugesi. I-Photovoltaic, ngakho-ke, isho ugesi okhanyayo, ichaza kahle indlela izinto zokwenziwa kwe-photovoltaic namadivayisi asebenza ngayo. I-Photovoltaic ...
I-Photovoltaics ukuguqulwa okuqondile kokukhanya kube ugesi ezingeni le-athomu. Ezinye izinto zibonisa impahla eyaziwa ngokuthi umphumela we-photoelectric obangela ukuthi bamunce ama-photon wokukhanya bese bekhulula ama-electron. Lapho la ma-electron wamahhala ebanjwa, i-electri ...